2008: Ny taonan'ny micro | Martech Zone
Alarobia, Desambra 26, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Ity dia taona nahaliana tamin'ny teknolojia an-tserasera. Raha mijery azy amin'ny fijerena tongotra 10,000 ianao, dia mbola mizotra amin'ny lalan-kivoahana amin'ny fampiasana ity haitao vaovao ity, ny Internet ny olombelona. Mazava fa mazava ho azy fa mino aho fa 2008 no taona nandehanan'ny fampiharana sy paikady Micro.
Ny fivoaran'ny tranonkala sosialy (Web 2.0) dia miroso haingana ho amin'ny faritany vaovao sy kendrena. Ny vahaolana goavana sy mifanaraka amin'ny rehetra dia hivoatra mba hanomezana anao fifandraisana mety amin'ny olona marina sy ny atiny mety… amin'ny fotoana mety.
Ny mailaka dia nihoatra ny fampiasana mahazatra ny eNewsletters ary mahazo vahana eo amin'ny tontolon'ny fifanakalozana. Raha tokony hanome ny 'hetsika' azy manokana, ny fandefasana mailaka dia nateraka ho tetikady iray amin'ny marketing amin'ny ankapobeny mba hitazonana ireo mpampiasa ary hitazona azy ireo hifandray amin'ny fivarotana antsinjarany, ny tambajotran-tserasera, ireo bilaogy novakiany, sns.
Mivoatra ihany koa ny mailaka, na eo aza ny fetran'ny mpanjifa mailaka mahazatra. Mandeha micro ny mailaka… fandefasan-kafatra ara-potoana bebe kokoa, fanaraha-maso bebe kokoa, ary hetsika maro hafa voatosika.
Niala tamin'ny Micro ny bilaogy Twitter, Jaiku sy Pownce. Sombiny haingana mamorona resaka virtoaly iray ka hatramin'ny maro.
Efa manomboka mampiasa Microblogging ny orinasa, fa ho hitantsika ny fampiasana antsinjarany ny Microblogging amin'ny taona 2008. Ho hitantsika ihany koa ireo vondrona voarindra tsara kokoa amin'ny bilaogy Micro… toy ny efitrano chat nivoatra tao amin'ny rindranasa fifampiresahana ampahibemaso folo taona lasa izay.
Ny tambajotra sosialy dia miala amin'ny paikady monolithic an'ny Facebook, MySpace, LinkedIn ary Plaxo… Ary mifindra amin'ny tambajotra sosialy micro an'ny Ning (naoty: SmallerIndiana, NavyVets, Fanatanjahantena Marketing 2.0, IndyLance vitsivitsy ve no natomboko na nirotsahako!).
Ireo tranonkala fanaovana tsoratadidy toy ny Digg dia ilaozana mankamin'ny tranonkala toa Mixx - izay ahafahanao manangana vondrona Micro hanatevin-daharana. Manentana ny olona rehetra mamaky ny bilaogiko aho hifandray amiko raha misy manasa ny Vondrona Marketing amin'ny Internet mba hahafahanay mizara rohy. Ny rindranasa hafa toy ny Truemors dia hitohy hipoitra miaraka amin'ny fahaiza-manao voadio fa tsy sokajy notendrena.
Ny Geographic Information Systems an-tserasera dia araraotina bebe kokoa handeha micro. Google, Yahoo, ary Microsoft manohy manatsara ny angona isam-paritra ho an'ny fikarohana Geographic nohatsaraina. Google aza manohana KML amin'ny sitemap, hamantatra ara-jeografika sy hanondro ireo tranokalanao!
Mandeha Micro ny horonan-tsary (lahatsoratra nohavaozina miaraka amin'ny tolo-kevitr'i Nil's hevitra tao amin'ny Scobleizer). Utterz, Seesmic ary QIK. Miovaova ny haitao horonan-tsary sy finday, ahafahan'ny olona manoratra sy mampakatra ny video mora kokoa amin'ny kalitao tsara kokoa!
Ny lozisialy amin'ny maha Applications Serivisy azy dia hitohy hohamafisina mba ho malefaka tsara amin'ny marika sy fampidirana amin'ireo rindranasa hafa na marika hafa. Tsy misy intsony ilay fampiharana «am-bifotsy» ampy hividianantsika sy hametrahana antsika, tsy maintsy mampiasa teknolojia CSS isika hanovana ny fampiharana antsika amin'ny tontolo iainana rehetra. Tsy maintsy manangana rindranasa afaka manova hatramin'ny antsipiriany kely indrindra (micro) isika.
Eo izany, ny vinavinako ho an'ny taona 2008 - ny taona fampiharana ny paikady bitika sy ny asa fandraharahana bitika. Ny fahaizana mamorona toy ny vondrona, fampiharana ara-jeôgrafika ara-jeografika, SaaS misy marika mikraoba, na vondrona tsotsotra tsotra no hampiasaina tanteraka amin'ny taona 2008. Ireo izay tsy hifanaraka dia hadino.
Tags: 2008tsoratadidyrafitra fampahalalana momba ny jeografikatsaokasari-2008 marketingmadinikahaino aman-jery sosialytambajotra sosialyrindrambaiko ho serivisy
Dec 27, 2007 amin'ny 2: 47 AM
Tsy misokatra ho an'ny mpanjifanao ny vondrona Mixx anao. Nanindry ny rohynao aho raha te hiditra ary nahazo ity hafatra ity:
“Oay! Misy zavatra tsy mety.
Pssst: Mbola tsy nasaina ato amin'ity groupe ity ianao ka tsia, tsy afaka manao an'izany ianao. Fa anontanio tsara fa sao dia havelany hiditra ianao.
Dec 27, 2007 amin'ny 9: 35 AM
Indrisy anefa fa tsy manolotra 'vondrona misokatra' i Mixx (araka ny fahitako azy!). Raha tianao, ampiasao ny taratasin'ny fifandraisana ary alefaso amiko ny adiresy mailakao dia hanipy fanasana ho anao aho!
Dec 27, 2007 amin'ny 5: 49 AM
Toa 'mediasnacks' manodidina rehetra 😉
Mpanorina ny MediaSnackers
Dec 27, 2007 amin'ny 10: 33 AM
Raha mandeha amin'ny micro tokoa ny zava-drehetra, ary tsy maintsy manaiky aho fa marina ny zavatra lazainao, amin'ny maha-olona antsika dia ho tafiditra amin'ny resaka kely kokoa isika, toy ny hoe ao amin'ny fety lehibe ianao ary miresaka amin'ny olona 5 na 10 mandritra ny alina.
Amin'ny farany dia tena mila fomba tsara ahafantarana ny momba ireo fety ireo isika tahaka ny fantatry ny rehetra momba ny Facebook tamin'ity taona ity.
Ny iray amin'ireo tena olana hitako sy niezahako nanaraka tamin'ity taona ity dia ny fiovana goavana sy ny fahasarotan'ny fitazonana azy. Hitako fa nianatra momba ny teknolojia vaovao avy amin'ny olona toa an'i Scoble aho tamin'ny famakiana ireo fahana RSS tao amin'ny mpamaky Google-ko saingy mora ho an'ny teknolojia lehibe ny tsy hita raha tsy misy olona ankoatra an'i Arrington manampy antsika hanaraka izay hojerena.
27 Desambra 2007 à 12:52
Hey, misaotra lehilahy amin'ny filazana. Tsy te hampihena ny lanjan'ny hafatrao fantatrao mihitsy aho. Tena marina ny momba ny vola raha ny fijeriko azy. Ny fahalalam-pomba angamba dia ny fanehoan-kevitra eto aloha, na dia mety ho "miditra" koa angamba. Faly aho namaky ny lahatsoratrao. Miarahaba.
27 Desambra 2007 à 2:52
Aza manahy, Nil! Nitondra hevitra lehibe ianao. Niresaka video aho mandra-pamakiako ny hevitrao - ary marina ny teninao!
27 Desambra 2007 à 3:46
Ny iray amin'ireo zavatra nanintona ahy hatrany amin'ny teknolojia sy ny haino aman-jery vaovao dia ny fahaizana mampifangaro zavatra sy mamorona zavatra vaovao mahaliana (Miala tsiny, tsy afaka mieritreritra teny tsara kokoa noho izany amin'izao fotoana izao.) lasa ad hoc ny zavatra hany ka vitsy ny olona no mahalala ny fisiany. Mieritreritra manokana momba ny zavatra toy ny tenifototra ao amin'ny Twitter aho. Mba tena hisy fiantraikany amin'izany rehetra izany, dia mila misy karazana hazo telefaonina amin'ny fampielezana ny vaovao amin'ny laika satria - andao hiatrika izany - tena vitsy ny olona mahafantatra ny atao hoe RSS, mainka fa misoratra anarana. amin'ny sakafo manan-danja rehetra ary sivana izany rehetra izany.
Farany, ny adiko dia ny maro amin'ireo fahafahana ara-barotra izay hitan'ny olona amin'ny famahanam-bolongana bitika sy ny haino aman-jery finday ary ny ambiny rehetra dia ireo karazana zavatra tian'ny olona toa ahy hitabataba mba hialana. Tsy manohitra ny hevitra manokana aho fa tsy maintsy misy – ary tsy maintsy ilaina izany – fomba mazava sy tsotra hitantana sy hifehezana ny zavatra niainako. Heveriko fa ny tetikasa toa an'i OAuth sy OpenID dia mandeha lavitra amin'ny fanamorana ity karazana zavatra ity saingy heveriko fa mbola betsaka ny asa tokony hatao hiarovana ny olona. Rehefa mandeha ny micro izao tontolo izao dia mihamitombo manokana ny habaka idiran'ny mpivarotra. Ary tsy dia sitrako loatra ny fanafihan'ny toerana misy ahy manokana. Raha manasa anao hiditra aho dia tsara. Fa raha asainao miala aho dia mivoaha fa raha tsy izany dia havoakako ianao.
$.02 fotsiny izany.
27 Desambra 2007 à 5:14
Farafaharatsiny izany sandan'ny nikela, Jamie 😉
Heveriko fa nahatsikaritra zavatra roa ianao… voalohany dia mivoatra ny teknolojia ary zavatra tsara ny evolisiona. Ny teboka faharoa ataonao dia ny antony ilantsika fitaovana tsara kokoa. Raha manana vokatra na serivisy mahaliana anao aho, dia ho tianao ny hahalala momba izany (amin'ny teninao) rehefa nanasa ahy ianao.
Mitadiava teknolojia mitondra ny vokatra na serivisy amin'ny ho avy izay mitady na zavatra ilaina io vokatra na serivisy io no tadiavintsika. Ny zavatra farany tiako hatao dia a) mandany ny volako amin'ny dokam-barotra tsy tonga amin'ny olona sahaza ary b) tezitra ny olona toa anao amin'ny fametrahana azy eo amin'ny tavanao rehefa tsy nangataka izany ianao.
Faly aho amin'ny fivoaran'ny teknolojia izay mbola hampitambatra ny tsena! Enga anie ka tsy hahatezitra olona toa anao izahay raha mbola mahafantatra izany. 🙂
Dec 28, 2007 amin'ny 2: 43 AM
Miaraka amin'ny fampahalalana rehetra hita ao amin'ny tranonkala, dia tsy maintsy sivana isika vao afaka mahazo izany. Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanasivana ny niche na amin'ny teny hafa dia ny fananganana vondrom-piarahamonina micro na ny dikan'ny vaovao. Ekeko tanteraka ny faminanianao.
Dec 31, 2007 amin'ny 5: 11 AM
Misaotra amin'ity lahatsoratra ity. Ekeko fa manana ny fahefana i Micro. Nahoana? Satria mora ny manao izany. Tsy manantena anao hanoratra tantara ambony misy fiandohana sy afovoany ary fiafarana mahafinaritra ny olona. Ary mora kokoa ny mihinana, tsara kokoa: 'mijery'. Miarahaba.
7 Feb 2008 tamin'ny 7:36 maraina
Nanontany tena aho raha misy afaka manampy ahy. Mitady ny olana lehibe indrindra amin'izao fotoana izao aho amin'ny varotra mifandraika amin'ny teknolojia…ankasitrahana ny soso-kevitra rehetra…mifaly!!!